Inombolo yomzekelo HJ-T33-020
Amandla (W) 300w
Materiall Ikhabhoni, iphe
Umsebenzi Ukusela Amanzi Ekhaya
Igama WOKUFUNDA t33 12 `` lokucoca ulwelo iCartridge emgceni iCartridge lokucoca ulwelo
Ubungakanani 2.5 "* 12
Inqanaba leMicron 1um, 5um, 10um,
1. Umthamo wonyango wahlukile
I-t33 enkulu: umthamo we-150 yemigqomo yamanzi.
Incinci i-t33: umthamo we-150 yemiphanda yamanzi.
2. Ukuchaneka kokucoca kwahlukile
Ukuchaneka kokuchaneka kwe-t33 enkulu yi-0.2 μ m, enokucoca ulothe kunye nezinye izinyithi ezinzima emanzini nakwizinto eziqhelekileyo eziguquguqukayo zezinto eziphilayo.
Ukuchaneka ngokuchanekileyo kwe-t33 encinci yi-0.2 μ m, enokucoca ulothe kunye nezinye izinyithi ezinzima emanzini nakuzo zonke iikhompawundi eziphilayo.
Ukusebenza komgaqo wokucoca amanzi:
Inqanaba 1: PP umqhaphu: susa zonke iintlobo zezinto ezibonakalayo / uthuli kunye nobumdaka emanzini etephu.
Inqanaba lesi-2 nelesi-3: Ikhabhoni yangaphambi kokuba isebenze: Inxalenye yesicoci samanzi sokuhambisa esisezantsi, inqanaba lesithathu yi-PP COTTON ukususa iklorine nokungcoliseka kwendalo. Inokufunxa ivumba elikhethekileyo, umbala kunye nephunga lezinto eziphilayo emanzini.
Inqanaba 4: I-ultrafiltration okanye i-reverse osmosis membrane: inwebu inokususa iibhaktheriya, ii-virus, i-spores kunye nezinye izinto emanzini.
Inqanaba 5: Thumela isixhobo sekhabhoni esenziwe sasebenza: ukuphucula ngakumbi incasa kunye nokususa ivumba.
Uninzi lwabahlambululi bamanzi bamkela ubume benkqubela phambili ngokusekwe kumgaqo wokucoca ulwelo, oluqulathe amanqanaba amaninzi eefilitha zePC zokucoca ezixutywe kuthotho ukusukela ekuqaleni ukuya esiphelweni. Ukuchaneka kweekhatriji zeefilitha ze-PP zicwangciswe ngolandelelwano ukusuka kwezantsi ukuya phezulu, ukuze kufezekiswe amanqanaba amanqanaba e-PP yeefilitha zokucoca ulwabelwano kunye nokuthintela ukungcola, ukwenzela ukunciphisa ukucoca i-cartridge ye-PP kunye nokukhutshwa kwelindle lokuhambisa amanzi, amaxesha okudilizwa kunye nokuhlamba, kunye nokwandisa umjikelo wokutshintsha i-cartridge yefilitha ye-PP.
Olunye uluvo loyilo olutsha kukusebenzisa umgaqo wokwahlulwa kobuninzi kunye nokuzicoca. Uluvo lwalo loyilo alusenako ukubonelela ngendawo eninzi yokuqokelela ukungcola. Endaweni yoko, yamkela umgaqo wokwahlulwa kobuninzi ukwahlulahlula indawo encinci yamanzi acocekileyo. Kwangelo xesha, yenza ukuba amanzi ahambileyo ahambe njengesiqhelo, ukuze ukungcola kuthathwe ngexesha kunye nokuhamba kwamanzi, ukuze amanzi angaboli.
Ngale ndlela, amanzi acociweyo anokufumaneka, kwaye ukungcola akunakho okanye akukho lula ukuhlengahlengisa kumatshini, ukuthintela ukwenziwa kongcoliseko lwesibini kunye nokunciphisa kakhulu ilahleko ye-PP yecartridge yokucoca ulwelo. Umgangatho wamanzi ungcono, ukhuselekile, ukonga umbane kunye nekhabhoni esezantsi. Lo mgaqo mtsha wokucoca amanzi ucocekile uphumelele imbasa yegolide ye-7th International Invention Exhibition, eyinto enye kwezimbini.
Iphucula isicoci samanzi esintu ngenxa yeziphene zesakhiwo esinye ngaphandle, oko kukhokelela kugxino lwamanzi amdaka kumatshini aphezulu kwaye aphezulu, kwaye ekugqibeleni abe lilindle, ngoko ke isicoci samanzi sokucoca asinayo ingqikelelo kwelindle kunye nelogutyulo lokucoca amanzi, endaweni yokuhlamba amanzi. Ngokuphuculwa kwemigangatho yokuphila, ukuthandwa kwesicoci samanzi kuya kuba ngakumbi nangakumbi, iimveliso zetekhnoloji entsha zibhetele ukuhlangabezana neemfuno zabantu.
I-Wuhu Huaji Filtration Technology Co, Ltd ngumthumeli wefilitha okwe China. Inkampani yethu inezinto zobugcisa, imveliso ehambileyo kunye nezixhobo zokuvavanya. Ke sineseti yolawulo lwentengiso nenkqubo yokuqinisekisa umgangatho kwinkqubo yemveliso.
Sizinze e-Anhui, China, ukuqala ngo-2012, ukuthengisa kwi-Yurophu eseMazantsi (65.00%), kwiNtengiso yaseKhaya (20.00%), mpuma Asia Asia (15.00%). Kukho abantu abamalunga nama-51-100 eofisini yethu.
2. Singakuqinisekisa njani ukuba umgangatho?
3.Yintoni onokuyithenga kuthi?
I-PP iyanyibilika iCartridge yecwecwe evaliweyo, icartridge yefayile yenxeba yocingo, icartridge yecafri eyenziwe yasebenza, inwebu, icartridge yokucoca ulwelo
Senza izihluzo ze-PP iminyaka emininzi. Inkampani yethu inezinto zobugcisa, imveliso ehambileyo kunye nezixhobo zokuvavanya. Ke sineseti yolawulo lwentengiso nenkqubo yokuqinisekisa umgangatho kwinkqubo yemveliso.
Imigaqo Yokuziswa eyamkelweyo: FOB, EXW ；
Imali eyamkelweyo yeNtlawulo: i-USD, i-EUR, i-CNY;
Uhlobo lweNtlawulo eyamkelweyo: null;
Ulwimi oluthethiweyo: IsiNgesi, isiTshayina
Egqithileyo 10 "t33 uqhagamshelo olukhawulezayo
Okulandelayo: 20inch UDF
Isihluzi samanzi okusela
Icebo lokucoca ulwelo lwe-alkaline emgceni
Iposi yeCarbon Filter iCartridge
Post iCartridge lokucoca ulwelo
Amacandelo okucoca amanzi
Kk Isihluzi seCartridge, Icebo lokucoca ulwelo emgceni, iCartridge yokucoca amanzi, Isihluzi sePp Meltblown Cartridge, Kk Gac Cto Isihluzi seCartridge, Iifilitha zamanzi zeNdlu iphela,